Manaova fety Halloween
Ny ravaky ny trano
Fialamboly mampatahotra ho an'ny fety
Ny fikarakarana sakafo amin'ny fety Halloween
Mamitaka sa mitsabo? Ny vatomamy ho an'ny tanora
Ny fonosana ankapobeny an'ny antoko dia tsy maintsy mifanaraka
Ny Halloween koa dia mankafy ny fitomboan'ny lazan'ny any Eropa, koa tsy mahagaga raha misy hatrany ny fety atao amin'izao andro izao. Rehefa dinihina tokoa, dia fety manokana foana ny fety Halloween. Ho an'ity, ireo vahiny nasaina dia miakanjo ary matetika miseho amin'ny akanjo tsy mahazatra.
Toy izao no fahombiazan'ny antoko Halloween
Saingy mba hidina tsara amin'ireo vahiny ny fety Halloween, dia tsy maintsy atao ny fanomanana sasany hahafahan'ireo vahinin'ny antoko mankafy amin'ny fety. Rehefa mikarakara fety amin'ny Halloween dia misy antony isan-karazany izay manampy amin'ny fanatanterahana ny fankalazana. Mazava ho azy, ny ravaky ny trano iray manontolo dia tena zava-dehibe, satria raha tsy misy ny endrika mety dia sarotra ny mamorona ny rivotra iainana ilaina amin'ny fety Halloween.
Mikarakara fety Halloween - © Alliance / Adobe Stock
Ny toe-tsaina mety amin'ny fety Halloween dia singa iray manapa-kevitra, fa ny fikarakarana sakafo ho an'ny vahiny dia tokony ho vonona ihany koa. Miankina amin'ny isan'ny vahiny asaina amin'ny fety dia tokony homena sakafo sy zava-pisotro sahaza azy ireo mba hikarakarana tsara ireo vahiny.
Ny zava-mamy sasany dia tokony kasaina hatao amin'ny fety Halloween ihany koa, satria ny tanora dia nahita ihany koa ity festival ity ary mampiasa Halloween hivezivezy isan-trano, tanjona amin'ny fanangonana zava-mamy araka izay tratra. Noho izany antony izany dia tokony ho vonona foana ny zava-mamy sasany. Mba handaminana ny fankalazana dia azo atao ihany koa ny mampiantrano lalao fety sasany. Miaraka amin'ny drafitra mety, misy ny fotoana hikarakarana antoko Halloween mahomby amin'ny rehetra.
Ka ny antoko Halloween dia fahombiazana ara-pahitana ihany koa, dia misy dikany ny handravahana ny trano. Amin'izany fomba izany, ny atmosfera mampihoron-koditra dia azo noforonina mba hahazoan'ny fankalazana ny filany mety. Misy fomba maro samihafa handravahana ny tranonao ho an'ny fety Halloween.
Tena zava-dehibe ny misambotra ny fihetsiky ny fety ary mamolavola ny trano mifanaraka amin'izany. Fitaovana fanta-daza ny voatavo raha ny amin'ny fanaingoana ny trano amin'ny Halloween. Ny fotoana mety dia raisina am-pifaliana amin'ny fanaovana sokitra grimaces ao anaty voatavo. Izany dia mahatonga ny voatavo ho toy ny olon-dratsy, izay miandry ara-bakiteny ny fampitahorana ny olon-kafa. Matetika napetraka eo anoloan'ny varavarana fidirana ny voatavo toy izany, izay mandray ireo mpitsidika ary manome azy ireo ny fahatsapana voalohany ny haingo Halloween.
Mazava ho azy, misy fomba maro hafa hahatonga ny trano ho lasa mampatahotra. Ny cobwebs artifisialy dia manome antoka fa noforonina atmosfera mahatsiravina tokoa. Ny kobalika dia azo apetraka na aiza na aiza ao an-trano. Tsy lazaina intsony fa misy dikany ny fanantonana ny vatokely izay hitan'ny vahiny azy ireo avy hatrany. Indrindra ny olona matahotra hala dia ho raiki-tahotra amin'ny vatokely manerana ny trano. Ny Cobwebs dia mampiditra ny hala sy ny sary spider plastika kely toy izany ary azo apetraka ao anaty harato mba hahatonga ny haingo ho voajanahary kokoa.
Ny pataloha kofehy mamirapiratra ao amin'ny maizina dia mahavita manangona maso tsy manjombona mandritra ny fety rehefa kely ny jiro. Ny taolana plastika dia mety hahatonga ny olona atahoran'ny antoko hatahotra ny taolana. Mba hahatongavan'ny haingon-trano ho azy manokana, ny hazavana sy ny mozika somary manaitaitra dia mety ho fitaovana tsara hitarika ny toe-po amin'ny fety amin'ny làlana irina. Mazava ho azy fa misy hevitra haingon-trano hafa ahafahan'ny antoko Halloween manatsara ny optika. Na izany aza, ny lafiny hafa dia tsy azo odian-tsy hita rehefa hikarakara fety Halloween tsara.
Ny programa fety sahaza azy dia afaka miantoka fa tsy misy mankaleo amin'ny fety ary afaka mahita zavatra hatao amin'ny fotoana rehetra ny vahiny. Fa ny hetsika inona no mety amin'ny fety Halloween tsara? Amin'ny ankapobeny, ny mpampiantrano dia tokony hiezaka ny hahatonga ny fety hampihorohoro, saingy mazava ho azy fa tsy tokony hatao ambanin-javatra ny fahafinaretana, satria ny vahiny dia te-hiala voly amin'ny fety ary hankafy fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny olon-kafa.
Raha fankalazana kely kokoa miaraka amin'ny namana izany dia azo ampiasaina, ohatra, ny mitantara tantara mampihoron-koditra kely. Ny tantara toy izany dia mety indrindra amin'ny takariva hariva. Ny jiro dia azo vonoina hamoronana rivo-piainana mety amin'ilay tantara mampihoron-koditra.
Raha manana toerana ilaina ao an-tranonao ianao dia azonao atao ny mampiasa efitrano iray manontolo hanovana azy ho kabine mampatahotra. Ao amin'ity efitrano ity dia zava-dehibe ny fandraisana zavatra haingon-trano maro araka izay azo atao mba hamadihana ny efitrano ho toerana mampihoron-koditra. Eto koa, dia tsara ny hamelana ny hazavana hiseho ho manjombona araka izay tratra mba hamoronana toe-po mety.
Miankina amin'ny fomba mahavariana ny famolavolana ny efitrano, ny ankizy dia tsy tokony hiditra amin'ity toerana ity mihitsy na farafaharatsiny raha miaraka amin'ny olon-dehibe iray. Ireo izay tia mandamina lalao mampieritreritra dia afaka mampiasa ny fety Halloween handaminana lalao mpitsongo mampatahotra. Ohatra, ny zavatra iray dia azo afenina any an-trano, izay tsy maintsy hita miaraka amin'ny fanampian'ny famantarana.
Ireo mpandray anjara dia manana fotoana hizarana ho ekipa kely hahafahana mifehy haingana kokoa ny fanamby. Ity lalao ity dia mitovy amin'ny fihazana scavenger. Lalao iray hafa koa no malaza be amin'ny fety Halloween. Ny vahiny dia tsy maintsy manaiky ny hotapenana ny masony. Nomena sakafo isan-karazany izy avy eo ary tsy maintsy maminavina izay hohaniny.
Satria faly foana ny olona rehefa tsy fantany izay hohaniny, ity lalao kely ity dia misy antso avo. Ny sakafo izay mahatsapa somary hafahafa ao am-bava ary tsy azo atolotra eo noho eo dia mety indrindra amin'ity lalao ity. Mba hisorohana ny olana dia tsy tokony handray anjara amin'ny lalao toy izany ny olona mijaly amin'ny tsy fandeferana na ny tsy mahazaka. Na izany aza, misy fiovana hafa amin'ity lalao ity izay tokony hahatsapan'ny mpandray anjara zavatra amin'ny masony.
Mety tsara amin'ny fety Halloween ihany koa ity lalao ity, satria eto, ohatra, hala hala plastika na zavatra mampatahotra hafa dia azo tsapaina. Ankoatry ny fialamboly, ny sakafo koa dia lafiny lehibe amin'ny antoko rehetra.
Ankoatry ny haingo dia zava-dehibe ny fikarakarana ny vahiny. Rehefa dinihina tokoa, ny mampiavaka ny mpampiantrano tsara dia ny fanolorany sakafo sy sakafo ampy ho an'ny vahininy. Safidy lehibe amin'ny lovia samihafa dia tsy voatery antenaina amin'ny fety toy izany, fa ny tompon-trano dia tokony hiezaka ny hanolotra nibble hafa farafaharatsiny mba hahitan'ny vahiny zavatra hohanina maivana foana.
Mba hampifanarahana kely ny sakafo amin'ny Halloween dia azo atolotra ny fomba fahandro samihafa, izay mampatahotra kely ny vahiny. Ohatra, azo atao ny manome endrika vaovao ny sakafonao miaraka amina zavatra noforoniny manokana. Ny saosisy na ny horonan-koba dia azo ampiasaina hanamboarana ny sakafo amin'ny Halloween, satria ireo lovia ireo dia azo ampiasaina hamoronana rantsan-tànana sy rantsan-tongotra mahafinaritra, izay tsy hoe tsara tarehy fotsiny, fa tsara ihany koa ho tsakitsaky kely ho an'ny vahiny.
Misy ihany koa ny fanitsiana Halloween hatao amin'ny zava-pisotro. Amin'ny fety Halloween, ohatra, hevitra tsara ny manolotra totohondry izay misy loko tsy mahazatra. Indrindra rehefa any amin'ny fety ny ankizy dia tsy lazaina intsony fa tsy maintsy misy ihany koa ny zava-pisotro tsy misy alikaola mba hanomezana sakafo tsara ihany koa ny zanaka.
Misy dikany ihany koa ny fananana zava-mamy be ao an-trano amin'ny takarivan'ny Halloween mba hahafahan'ny ankizy maneno lakolosim-baravarana manome sakafo kely ho azy ireo.
Tsy fahita any Etazonia izao ny fahalanisan'ny ankizy isan-trano amin'ny Halloween mba hanangona vatomamy. Io fanao io dia nihanaka tany Eropa ankehitriny ary nanjary mahazatra kokoa. Noho io antony io, dia misy dikany ny fananana zava-mamy ao an-trano rehefa anaovana fety Halloween, satria ny haingo sy ireo vahiny manao ankolafy dia manazava fa ankalazaina eto ny Halloween.
Ny takelaka misy vatomamy isan-karazany dia azo apetraka eo ambony latabatra eo akaikin'ny varavarana fidirana. Amin'izany fomba izany dia azo atao ny manolotra ny vatomamy amin'ny ankizy haingana sy mora nefa tsy mila mandeha mamaky ny trano haka zava-mamy. Hafa tanteraka ny vatomamy omena ny ankizy. Matetika dia vatomamy sy lolofotsy izay tian'ny ankizy ekena koa.
Ny sakafo mahasalama, toy ny paoma, etsy andaniny, dia tsy raisina ary tsy tokony hodinihina, farafaharatsiny amin'ny Halloween, satria miakanjo ny zaza handray vatomamy.
Na izany aza, tsy zava-dehibe fotsiny ny fanomezana fahafaham-po ireo vahiny efa lehibe. Ny tanora koa te-hiaina zavatra betsaka amin'ny fety Halloween. Izany no antony tokony hisian'ny fotoana ampy hiasana ho an'ireo vahiny fety kely hahafahan'izy ireo miala voly mandritra ny fijanonany. Mazava ho azy, ny fampiantranoana ny fety Halloween anao dia mitaky asa betsaka, fa ity andro ity dia indray mandeha isan-taona fotsiny no ankalazaina, noho izany ny fampiantranoana ny fety Halloween anao dia zavatra iray lehibe.
Manana fanontaniana, sosokevitra, tsikera ve ianao sa mahita bibikely?
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 29. Oktobra 2020 27. Jolay 2021 Sokajy fialantsasatra ho an'ny daholobeKeywords Dekoration, hafahafa, gruseln, Halloween, Halloween-Party, Halloweenparty, Party
indray Lahatsoratra taloha: Fahasalamana amin'ny baolina fandroana vita amin'ny tena
more Lahatsoratra manaraka: Alika ho biby ho an'ny ankizy